မေမြတ်နိုးရဲ့ အကြံပေးချက် - Shape Journal
Home A Talk မေမြတ်နိုးရဲ့ အကြံပေးချက်
January 31, 2018 A , Talk Edit
Q. ဒီကားလမ်း Traffic တွေကြောင့် ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စတွေ ထိခိုက်ရတဲ့ အခြေအနေထိ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အပေါ်မှာ ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်မျိုး ပေးချင်ပါလဲ။
A. မြန်မာပြည်က International Standard မီလာပြီဆိုတော့ လူတိုင်း ကားစီးနိုင်လာကြပါပြီ။ အဲဒါ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ GDP (Gross Domestic Product) တိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ အရမ်းကောင်းပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းတွေက အရမ်းမကောင်းသေးတော့ မြတ်နိုးတို့လို အနုပညာရှင်တွေ တင်မကဘူး တခြားသူတွေ ပါ အဲဒီဒဏ်တွေကို ခံစားနေရပါတယ်။ မြတ်နိုးတို့လို မယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အချိန်တိကျဖို့ ဆိုတာက အရမ်းအရေးကြီးတယ်။
ဒါပေမယ့် ကားလမ်းပိတ်တာကတော့ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့ မရဘူး။ အဲဒါတွေကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ဘက်က စောနိုင်သမျှ စောစောထွက်တယ်။ တစ်နာရီလောက် တော့ စောထွက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးချင်တာကတော့ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေကို တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှသာ သုံးစေချင်ပါတယ်။ ဒီ Public Transport ပေါ့ Taxl ဖြစ်ဖြစ်၊ Bus ကားဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုတာ ပိုကောင်း တယ်ပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းစေ့ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေနဲ့ သွားလာနေ မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Global Warming ဆိုတဲ့ ဟာကြီးကလည်း တော်တော်ဆိုးရွားနေပြီလေ။
ကိုယ့်အနေနဲ့ နည်းနည်းပါးပါးလေး ကူညီလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းအတွက် အရမ်းကို အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိစေမှာပါ။ ကိုယ်တစ်ရက် ကားမမောင်းလိုက်တာက ဘာမှအကျိုးမပြုလောက်ပါဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် ဒီလိုတစ်ရက်တည်း တစ်ချိန်တည်းမှာ ကိုယ်နဲ့စိတ်ကူးတူတဲ့သူတွေလည်း ရှိနိုင်သေးတယ် လို့တွေးပြီး ဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Global Warming အတွက် အရမ်းကို Effective ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။